Sidee ayay udhacday qisada geeridii 2da marxuum ee c/raxiim Rabiish iyo maxamed saalax?. |
Sidee ayay udhacday qisada geeridii 2da marxuum ee c/raxiim Rabiish iyo maxamed saalax?.
Waa habeen Arbaco ah, goobtu waa jaamacada bariga afrika faraceeda buuhoodle, saacadu waa intii udhaxaysay 8:00 PM-9:00 PM.
Waxan jeclahay in aan idinla wadaago qisadan murugada badan reebtay, sida ay kubilaabantay iyo siday kudhamaatay.
Dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne kuxigeenka puntland uu gaaray degmada buuhoodle ee gobolka cayn halkaas oo uukutagay safar ukuurgalida xaalada deegaanka ah.
Maalmihii udanbeeyay ee uukasoo tagayay deegaanka madaxweynuhu isaga oo goob fagaare ah ugu khudbaynaya bulsho qaybaheeda kala gedisan ayay bilaabantay xurgufta dhexmartay 2da marxuum.
Sida dadka deegaanku iisheegeen waxaa la iixaqiijiyay in isfahmi waaga 2da marxuum uu sidan kubilaabmay:-
Marxuum c/raxiim rabiish alle naxariistii janoo haka waraabiyee waxa uukamid ahaa dadkii sida ugu dhow ulashaqaynayay madaxweynaha, hormuudna u ahaa qaban qaabada soodhaweyntiisa iyo isku duba ridka shaqooyinka iyo goobaha madaxweynuhu tagayo.
Sidaan horay idiinkusoo sheegay madaxweynuhu markii uudhamaystay khudbada goob fagaare ah oo bulshada uukula hadlayay ayuu damcay inuu baxo, bixintaankiisa kadib waxaa dhacday in marxuum maxamed saalax alle naxariistii janno haka waraabiyee isaga iyo arday school badan ookale inay goobtii kabaxaan.
Marxuum c/raxiim iyo marxuum maxamed saalax waa meesha ay kabilaabantay xurguftoodu shaydaankuna ka dhex faa’idaystay, marxuum c/raxiim rabiish ayaa damcay inuu hakiyo ardayda inta uu goobta kabaxayo madaxweynuhu,balse arintaas waxaa ku qanci waayay marxuum maxamed saalax.
Arintaasi waxay kaliftay in 2da marxuum isfahmi waa kadib xaalkoodu isu bedelo gacan qaad,kaas oo xiligaas kusoo dhamaaday kala qabasho 2da marxuum ah iyo kala kaxayn balse uusan qanac fiican haysan natiijada kasoo baxday isfahmi waagaas iyo qaabka uuku bilaabmayba marxuum maxamed saalax Alle ha unaxriistee.
Taasi waxay kaliftay intiraba dhowr jeer gacan qaadkii hore kadib, goobo iyo wakhtiyo kala duwan uu dhacay gadood dhinaca maxamed yare kayimi, balse lagu guulaystay in wax dhibaato ahi dhex marin 2da marxuum.
Hawshii waxay ugudubtay dhinaca waalidiinta 2da marxuum iyo masuuliyiintooda, wada hadal dheer kadibna waxaa la isku afgartay in 2da marxuum la isukeeno gacantana la isu-saaro maalinta ay ku began tahay geerida alle ha uraxmadee marxuum c/raxiim rabiish, TA ALLE AYAA QORNAYD!!.
Cidna kuma fekerayn mana filayn falkan dhacay xitaa ma ahayn mid uqalmay natiijadii isfahmi waagii hore kasoo baxday, balse waxaa sifiican ushaqaysanayay cadowga umadda islaamku ay leeyihiin ee shaydaanka iyo qadarta eebe oo aan marnaba labaajin Karin!.
Sida aad lawada socotaan marxuum c/raxiim rabiish waxa uu ugeeriyooday dhaawaca nabar soogaaray habeenimadii jimcaha oo ahaa tooray uga dhacday feedha ugu hoosaysa feeraha jirka hoosteeda dhinaca gadaale taas oo markii ay kudhacaysay uusan wax dareen keeda ah lahayn( Nabar-aadan Filayn/Gaadmo) uuna ku dhuftay marxuum maxamed Saalax.
Dedaal badan iyo latacaalid loosameeyay kadib tiisa ayaa qornayd waxaana hoygiisa rasmiga ah lageeyay maalinimadii sabtida rabbi godka ha unuuriyee.
Marka ay dhacdo qiso caynkan ahi dadka islaamka ayaa ku-kala baxa sida ay ina fartay diinteena suuban taas oojidaysay 3dariiq oo ay tahay in midkood uuqaado qoyska dhibanaha wax loogaystay:-
In waalidka qofka dhintay ay cafiyaan dhiiga qofkoodii kadhintay balse ay diyo qaataan.
Inay cafiyaan diyada iyo dhiigaba.
Iyo inay qisaastaan, taas oo dhiganta diyada iyo dhiiga qofkii dhintay.
Maalin kadib qoysaska 2da marxuum ayaa kulan kuyeeshay magaalada buuhoodle si ay isaga afgartaan mashaqadii dhacday maalinimadii sabtida, wada xaajood kadibna waxay isku afgarteen in marxuum maxamed saalax X dayib lagu fuliyo qisaasta marxuum c/raxiim saleebaan faarax.
Qisaastii waa lagu fuliyay maxamed, Maalin kadib ayuu marxuum maxamed saalaxna uhoyday hoygiisa rasmiga ah rabbi naxariistii janno haka waraabiyee.
Xigasho Maxamed Rasaas